Top 15 YouTube 3D Videos maka Kids k
Ihe nile na-Maara Banyere Android, Kindle na PDF
Ụmụaka n'anya Ngwa. Olee otú ọtụtụ ụmụaka dị mma na-eji ha na nne na nna 'iPhones karịa ndị nne na nna? Na ịrị elu na-ewu ewu nke 3D fim, oputara na ụfọdụ n'ime ha ga-idem on YouTube ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ nkiri nịịka na ụmụaka ga-amasị. Ka anya na 15 top YouTube videos na 3D na-abụghị nanị fun ma ha na-na-aga na-ụmụaka nwere mmasị.
1.3DigitalVision ngosi ukwu
Nke a bụ ngosi ukwu nke ihe bụ mee ka 3D fim. Ọ na-agụnye edinam mkpachị dị ka skateboarding na a jụụ skate ogige, na hippos na-egwu mmiri na gbaa acha iyak.
2.Roller Coaster Ịme anwansị
Atụfu ndị aka na ikuku! Ọ bụ a fun igwe na-agba okirikiri na-agba ịnyịnya na-eme site na kọmputa-eme ihe oyiyi. Nke a YouTube 3D video bụ zuru okè n'ihi ma ụmụaka na ụmụaka n'obi.
3.Giant nnụnụ na ụgbọ elu
A nnukwu Turkey udele na-ewe anya na ijiji n'oge gara aga na igwefoto. Ọ na-akpado dị ka ndị kasị ibu nnụnụ filmed ngwa ngwa ngagharị na 3D. Animal hụrụ ga-n'anya-ekiri nnukwu nku flaapu dị ka ọ na ala karịrị nnọọ ndị isi nke ndị nkiri.
4.OK Go - White nkwonkwo mkpịsị music video
Ihe na-agaghi ahu n'anya banyere OK Go si videos? Ha na-na mgbe anya na-akpali. Onye a na atụmatụ stacking nke iko nke mgbe nile yiri ka amakwa physics, na nkịta na-enwe oké oge ebre. Onye a bụ na-otu nke kasị mma 3D videos maka ụmụaka.
5.Fun na Oké Osimiri na 3D - Greece
Ọ bụrụ na ị na-apụghị iri a ezinụlọ njem Europe afọ a, ka YouTube ka ya unu. Nke a ọmarịcha video egosi ihe ọ dị ka mmiri-skai na Greece, na ị na-ịhụ ya na 3D. Ọ bụ ya mere doo anya na ị fọrọ nke nta na-emetụ na mmiri.
6.ESPN - OSU vs. USC. College football - atọ nkeji nke na-akpali akpali na mahadum football edinam
A dị mkpirikpi 3D nkiri dị ukwuu maka ụmụaka n'ihi niile nke edinam na obi ụtọ. Ọ bụ a ịkpụ nke mbụ 3D na agbasa ozi n'ikuku ESPN efehe.
7.Relaxing Magic Forest Video na 3D na HD
Soft music na ọmarịcha mma ga captivate onye ọ bụla. Echiche na-agbanwe ugboro ugboro, otú ọ dịghị onye nwere ohere iji nweta Ịnọ nkịtị gwụrụ. Nke a bụ n'ezie ihe ezigbo 3D nkiri maka ụmụaka, na-enye ha ohere akwụsịlata ma tụsaratụ site n'ụbọchị.
8.Marine World Preview
Nke a video eji ka oyiyi na video ịme onye ọ bụla na akwarium na Fukuoka, Japan. Energetic Dolphins na a dịgasị iche iche nke yi azụ na oké osimiri na turtles ga-obi ụtọ na enchant.
Funny arụrụ n'ụlọ 3D nkiri na a Ihọd onye chere na ya maara ihe bụ ihe, ma chinchi nwere ụzọ ha na ọgwụgwụ. E nwere ihe karịrị otu nde YouTube akụrisị otú anya na-agụta n'ihi na nke a obere clip.
10.Animated 3D ngosi
Nke a animated nkiri a bụ ebube anya na ihe na kọmputa na-aga aga bụ ike nke na. Ọ bụ dị ka a planet akwụkwọ ma kpamkpam kọmputa site. Nke a 3D na-aga aga nkiri bụ n'aka na captivate.
11.Red Crabs IMAX ụgbọala na-adọkpụ
Kwa afọ na Australia na Christmas Island e nwere Mbugharị nke fọrọ nke nta enweghị atụ ịdị ukwuu - ọtụtụ nde amamiihe red crabs. Ha na-abịa si osimiri, ịgafe okporo ụzọ, na Isi anya ka spawn. The nkiri na-agwa akụkọ nke crabs, na nke a video bụ 3D ụgbọala na-adọkpụ na fim na.
Mkpado n'ihi na nke a na-ekwu na ọ bụ a ịnyịnya agbụrụ, ma nke a mara mma video bụ n'ezie banyere ịnyịnya na paddock na-asọ mpi dressage. Na Na Na, karịsịa obere ụmụ agbọghọ, ịhụnanya ịnyịnya na a video agaghị tụkwasịrị.
13.Jay Jay si Dance Off 3D
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya hip iwuli elu na n'okporo ámá ịgba egwú, a video bụ maka gị. The video bụ n'ezie ad maka mepere emepe attire, ma na-agba egwú dị nnọọ nwere ike ghara iti, na na 3D ọ na-erughị.
14.NASA 360 Presents Desert oke
Nke a fun 3D video bụ ihe niile banyere ngwá NASA ojiji na ule n'ọzara. Nwetara a nwa onye nrọ nke ịghọ astroloji otu ụbọchị? Nke a bụ video maka ya ma ọ bụ ya.
Ọzọ jụụ ohere video na 3D, nke a ụgbọala na-adọkpụ maka ihe IMAX film banyere anyanwụ ga na-gị na ụmụaka entranced, karịsịa na-ekiri Northern ọkụ na-agba egwu na 3D.
Nwere ike ghara inwe ezuru 3D maka gị na ụmụaka? Gbalịa mee ihe ndị Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe!
Ọ na-enyere gị ike gị 3D videos usọrọ ndị niile obere oge - Christmas, ụbọchị ọmụmụ, ma ọ bụ ọbụna na ụbọchị mbụ nke akwụkwọ.
Wondershare Na-eme ka flash slideshows nke gị oyiyi na-eje ozi dị a foto gallery maka gị foto, kwa. Juru n'ọnụ na atụmatụ, ọ pụkwara ime slideshows maka azụmahịa ngwa. Mesie ọhụrụ gị ahịa na a ngosi mmịfe nke gị ọzọ ntọhapụ nke ngwaahịa, ma ọ bụ a show featuring tupu mgbe oyiyi nke gị ọdachi dị ọcha-elu ọrụ. Nke ahụ, ohere na-adịghị agwụ agwụ.
N'ihi na n'ụlọ ojiji, ị pụrụ ime ka ike foto albums ịkọrọ ndị enyi na ezinụlọ, na i nwere ike bulite ha mfe ka Twitter na Facebook, ma ọ bụ E-mail ha ka ha onye ọ bụla. Họrọ site na otu nke karịrị 120 ndebiri nke pụrụ inyere gị melite gị ngosi mmịfe - Ọ dịghị mmemme ihe ọmụma dị mkpa!
Na ma eleghị anya dị mkpa ọbụna karị, ndị nile na ndebiri bụ free. Ụfọdụ na-haziri gburugburu a isiokwu, dị ka agbamakwụkwọ, ọhụrụ nwa, ma ọ bụ Christmas, ebe ndị ọzọ na ndị ọzọ ọnyà. E nwere ọbụna ihe karịrị 30 3D ndebiri n'ezie nwere ụfọdụ fun na foto gị. Ọ bụrụ na ị aghụghọ, na a ezi ụzọ, ị nwere ike ịmepụta gị template na mmebe ngwá ọrụ otú i nwere ike dee gị onwe gị imewe. E nwere fun ikwu n'ụzọ i nwere ike na-agụnye, captions i nwere ike tinye, na hyperlinks ị nwere ike itinye. Chọrọ ka ịgbakwunye music? Ị pụrụ ime nke, kwa.
The software dị mfe iji, kwa, na onye kensinammuo interface na a preview atụmatụ otú ị pụrụ ịhụ ihe gị okokụre ngwaahịa ga-ele anya dị ka tupu ọ bụ bipụtara. Ọ bụrụ na ị nwere ike pịa, ikpuru, na dobe, ị pụrụ iji Wondershare!
N'ihi ya, e na ị nwere ya - a n'oge okpomọkụ jupụtara 3D fun! Ma ị chọrọ ka gị onwe gị ma ọ bụ na-ekiri ihe e kere eke onye ọzọ na-etinye ọnụ, ọ bụ gị. Ma eleghị anya, ị ga-sitere n'ike mmụọ nsọ site na otu nke videos n'elu na gị na nwa gị nwere ike na-aga na-gị onwe gị na oyiyi na ike gị onwe gị pụrụ iche 3D nkiri, njikere ịkọrọ na YouTube. Ònye maara - eleghị anya ị ga-emenye ndị James Cameron nke ọzọ ọgbọ!
Get a Great DVD Creator enweghị Watermark
Olee otú iji tọghata URL MP3
> Resource> Video> Top 15 YouTube 3D Videos maka Kids